Kaoperativa any ambanivohitra : anjaran’ny fanjakana manamora ny asa | NewsMada
Kaoperativa any ambanivohitra : anjaran’ny fanjakana manamora ny asa
Nanomboka omaly ary mitohy anio eny amin’ny CCI Ivato ny fifampidinihana eo amin’ny vondron’ny kaoperativa malagasy sy ny NCBA/CLUSA* avy any Etazonia. Tanjona amin’izao fihaonana izao ny hanomezana vahana ny kaoperativa malagasy eo amin’ny fihariana misy azy. Nanokatra ny fotoana ny minisitry ny Indostria, Chabani Nourdine, sy ny mpitarika ny delegasiona amerikanina.
Efa nisy, nanomboka ny taona 1930, ny kaoperativa eto Madagasikara, tsy tapaka ny fisiany ka tena nampisongadina azy ny tamin’ny Repoblika faharoa, “kaoperativa sosialista”, notantanan’ny fanjakana. Amin’izao fotoana izao, ao anatin’ny sehatra tsy miankina tanteraka ny hoe kaoperativa, manana endrika orinasa. Izay ny mahatonga azy eo ambany fiahian’ny minisiteran’ny Indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina. “Tokony hanana rafitra ara-dalàna izay toeran’ny maha tsy miankina misy azy izay. Efa tamin’ny 1999 ny lalàna misy momba ny kaoperativa ka tokony havaozina hasiam-panatsarana”, hoy ny tale misahana ny fanohanana ny orinasa, Raharinjatovo Noroseheno.
Any amin’ny tontolo ambanivohitra ny ahitana kaoperativa maro, miasa amin’ny fambolena, fiompiana, jono, asa tanana, sns. Manome asa 40.000 izao ireo karazana kaoperativa 100 mahery manerana ny Nosy. Misy amin’izy ireo ny efa manondrana any ivelany, ao kosa ireo tena mbola mila tantanina, miandry fanjakana. Tanjona faritana ankehitriny ny hampiakatra azy ireo amin’ny sehatra indostrialy. “Amin’izao fotoana izao, mbola betsaka ny very amin’ny vokatra, koa entanina ireo mpikambana hiditra amin’ny dingana manaraka ho afaka hanodina ny vokatra avy any ifotony”, hoy Raharinjatovo Noroseheno.
Tsy anjaran’ny minisiteran’ny Indostria irery …
Anjaran’ny fanjakana ny manamora sy manampy ny sehatra tsy miankina amin’ny fanatsarana ny asany, toy ny fitadiavana lalam-barotra. Tsy manao ny asan’ny kaoperativa ny fanjakana fa manampy. Endrika iray amin’izay fanamorana ny asa izay ny fahatongavan’ireo vahiny amerikanina ireo, mitondra ny traikefany amin’ny famolavolana lalàna. Tsy anjaran’ny minisiteran’ny Indostria irery anefa izany fa ao koa ireo minisitera hafa, amin’ny fanaovan-dalana sy fotodrafitrasa, famatsiana herinaratra, fiantohana fandriampahalemana sy ny maro hafa. Niray feo rahateo ireo mpitarika kaoperativa eto an-toerana fa tsy tambo isaina ny olana any ambanivohitra, lasa sakana amin’ny famokarana.
NCBA/CLUSA* : National Cooperative Business Association/ Cooperative League of the United States of America